Utholwe esefile obesolwa ngokweba - Ilanga News
Home Izindaba Utholwe esefile obesolwa ngokweba
Utholwe esefile obesolwa ngokweba
Kuthiwa ubesekhathazile emphakathini
UBESOLWA ngokweba amawindi e-aluminium omakhelwane owesilisa waseZiko, KwaMakhu-tha, okutholakale isidumbu sakhe ehlathini sinamanxeba okushaywa umzimba wonke sibo-shwe izandla nezinyawo ngoLwesibili emini.
ILANGA lithole ukuthi uMnu Thabo Banda (25), ubulawa nje, ubesekhathazile emphakathini.
Amalungu omphakathi wakule ndawo athi kubonakale iloli ebelidla amagalani ngoLwesibili emini, lingenazo izinombolo, laqathaza isidumbu sowesilisa lasiphosa ehlathini eliseduze no-mgwaqo. Kuthiwa leli loli liqede ukuqathaza isidumbu sikaMnu Banda, lashaya lachitha.
Uyisemkhulu kamufi, uMnu Mtishi Mndaweni (67), utshele ILANGA ukuthi umzukulu wakhe ubulawa nje, kunabantu abebesanda kufika beyobahlasela emzini wakhe befuna umzukulu, bemsola ngokubantshontshela amawindi emzini wabo. Uthi laba bantu bangena bapeqebula yonke into esendlini, baze bagi-bela ngisho phezu kwendlu.
Utshele leli phephandaba ukuthi ubulawa nje, ubesemkhuze kaningi ezintweni ezibhedayo, okubalwa kuzo ukuganga nokudla izidakamizwa.
“Besengichithe imali yami eni-ngi ngimhambisa kododotela ngoba ngizama ukuthi bamsize ukuba ayeke ukudla izidakamizwa. Ubesenomkhuba wokuthi anyamalale izinsuku singamazi, esengakhele nezitha emphakathini.
“Ngigcine ukumbona ngoMsombuluko ebusuku, efika ekhaya ezocela ukuthi simphakele uku-dla. Nakhona ubefika nje bese-kunezinsuku samgcina.
“Ngimbikele ukuthi kunabantu abebefikile lapha ekhaya bemfuna, bemsola ngokuthi untshontshe amawindi kwabe sengimxoshile. Ubesefika ngobumnya-ma ngoba esezodla.
“Besengimkhuze kaningi lo mfana, ngimxwayisa ngobungozi balezi zinto azidlayo, ngimtshela ukuthi uzogcina ebulewe ngabantu uma engafuni ukuziyeka,” kusho uMnu Mndaweni.
Uthi ngesikhathi kufika ama-phoyisa eyombikela ngokutholakala kwesidumbu somuntu wesi-lisa ehlathini, ubevele esekulindele ukuthi umzukulu wakhe uzobulawa ngabantu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule icala lokubulala emuva kokutholakala kwesidumbu sowesilisa siboshwe izandla nezinyawo, sinamanxeba okushaywa umzimba wonke. Uthi amaphoyisa asenza uphenyo, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleBEZIQHAKAZILE IZINTOMBI EMHLANGENI
Next articleKuvalwe amaHhovisi kuMasipala obezokhononda eshisa amathayi